Ọdịiche dị n'etiti Sunstroke na Heat Stroke, ka esi chebe onwe anyị n'aka ha | Netwọk Mgbasa Ozi
Likebọchị dịka taa anyị na-eteta na ọtụtụ obodo kwụụrụ onwe ya na-enye aka maka oke okpomọkụ, ọ bụ naanị mgbe ahụ anyị na-enwekarị ike ikpo ọkụ. Enwere ọtụtụ ndụmọdụ na ndụmọdụ iji belata mmetụta ọ nwere. Nye onwe anyị ume, ghara igosipụta onwe anyị na etiti oge iji mega ma ọ bụ rụọ ọrụ, wdg.
Eziokwu bụ na ikpo ọkụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ozugbo, anaghị eme ya mgbe niile n'otu ụzọ ahụ, ọ bụghị otu akụkụ. Maka nke a, anyị ga-ahụ ihe dị iche n'etiti ọkụ ọkụ na igwe ọkụ. Ha abụọ bụ nsogbu dị egwu ma dị egwu nke usoro ikpo oku nke aru adighi aru oru.
1 Ọkụ ọkụ
3 Ihe na-akpata ọrịa ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ
4 Ihe ihe egwu
Igwe na-ekpo ọkụ na-eme mgbe ahụ dị na nnukwu okpomọkụ ruo ogologo oge. Ihe na - eme na nke a bụ na ahụ enweghị ike iwepụ ọkụ nke ọma, ma enweghị ike iweghachi ọnọdụ okpomọkụ ya. Ike ikpo ọkụ bụ nsogbu dị nro ma enwere ike ijikọ ya na ọnya ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, akwara na-egbu mgbu na mberede na ogwe aka ma ọ bụ ụkwụ na mgbe ụfọdụ n'afọ.
Inwe ike ikwu okwu banyere okpomoku ọkụ, ahụ ahụ onye ahụ ga-adị na 40ºC ma ọ bụ karịa n'ihi okpomọkụ nke gburugburu ebe obibi na adịghị ike ma ọ bụ n'ọnọdụ kachasị njọ, thermoregulation na-adịghị adị. Ọ dị mkpa ka ị ghara ịmegharị ya ọkụ, n'ihi na n'oge a, ọ bụghị ahụ na-eweli ọnọdụ okpomọkụ ya iji lụso ọrịa ọgụ. Nweghị ike ibudata ya.
Okpomọkụ ma ọ bụ ọrịa anyanwụ, nke na-enwe mgbagwoju anya na ọrịa ọkụ, Ọ na-abịa site n’ịbịakwute anyanwụ ruo ogologo oge. Enwere ike ịmalite ya site na ọkụ ọkụ, nke na-akpata oke nfu mmiri na nnu ịnweta site na ọsụsọ. Nke a na - akpata adịghị ike n’ahụ. Nke a bụ mgbe ọkụ na-ekpo ọkụ na-atụgharị ghọọ ọrịa okpomọkụ, mgbe ahụ anaghịzi enwe ike ijigide ọnọdụ okpomọkụ nkịtị.
Ihe na-akpata ọrịa ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ
Ogologo oge na gburugburu ebe obibi dị elu. N'okwu a, anyị na-ekwu maka ọkụ ọkụ ọkụ nkịtị, nke na-esiteghị na mbọ aka. Na-aga n'ihu elu okpomọkụ ọnụ na iru mmiri gburugburu, ihu ọma ya omume. Ọ na-emekarị na ogologo oge, site na ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ.
N'ihi mgbalị na mgbatị ahụ na okpomọkụ dị elu. N'ebe dị ọkụ, ebe a na-emega ahụ ma ọ bụ ọrụ, ọ bụ mgbe anyị nwere ụdị nsogbu a n'ihi ịmanye ahụ nke ukwuu. Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na ndị mmadụ anaghị eji okpomọkụ dị elu, o yikarịrị ka ha ga-ata ahụhụ site na ya.
A ghaghị iburu ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'uche. A uwe na-enweghị ume iku ume nke na-egbochi iku ume nke ọsụsọ nke mere na ahụ ga-ajụ oyi. Ọ oriri nke mmanya na-aba n'anya nke ahụ na-emetụta dysregulation na-ekpo ọkụ nke ahụ na-egbochi ya ịrụ ọrụ nke ọma. NA site na akpịrị ịkpọ nkụ, na-enweghị mmiri nke ọma n'ihi ọnwụ nke mmiri mmiri site na ọsụsọ. Maka onye ọ bụla n'ozuzu, mana karịsịa maka ndị na-eme egwuregwu, isi ihe dị mkpa dị mkpa. Mgbe ị na-efunahụ mmiri ọkụ na oke ọsọ ọsọ, ọ dị mkpa ị toụ mmanya tupu akpịrị ịkpọ gị nkụ, nke ahụ bụ ruo mgbe ahụ na-amịkọrọ mmiri mmiri, enwere oge ị ga-atụle.
Ihe ihe egwu
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe nwere ike ime n’oge ọ bụla, ụmụaka, ụmụaka na ndị agadi bụ ndị kacha nwee nsogbu. N'okpuru afọ 4 ma ọ bụ karịa 65 afọ ha na-ewekarị ogologo oge iji dozie ọnọdụ okpomọkụ.
Ndị na-eme egwuregwu na-egwu egwuregwu n'oge awa kachasị eluntas, dika igba oso ma obu igba igwe. N'okwu ndị a, iji gbochie ya ime, dịka anyị kwuru, hydration dị ezigbo mkpa.
N'ime oge dị ogologo na okpomọkụ dị elu, enweghị ntụ oyi. Ngosipụta mberede na anyanwụ dị ka mgbe anyị na-aga n'akụkụ osimiri.
Ọrịa na-adịghị ala ala, dị ka akpa ume, obi obi ma ọ bụ oke ibu, inwe ụdị obibi ndụ ma ọ bụ bụrụ onye enweela ọkụ ọkụ n'oge gara aga, ọnụọgụ nke nhụjuanya na-abawanye.
Na imecha, ọ dị mkpa ka a mata ọgwụ ụfọdụỌ dị mkpa ịhụ akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma ọ bụ jụọ onye na-ere ọgwụ. E nwere ụfọdụ ndị na-eme ka arịa ọbara ghara ịkpachi. Ndi na-edozi obara obara site igbochi adrenaline. Diuretics na ewepụta sodium na mmiri n’ime ahụ mmadụ. Na ụfọdụ ndị na-ebelata mgbaàmà nke uche, dị ka antidepressants ma ọ bụ antipsychotics.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Ihe dị iche n'etiti Sunstroke na Heat Stroke, otu esi echebe onwe anyị n'aka ha